प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हटाइएका मन्त्रीहरूको पद सर्वोच्चको आदेशपछि के हुन्छ? :: Setopati
त्यसो भए विघटन पूर्वका मन्त्रीले स्वत: काम गर्न पाउँछन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संविधानविद पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशले विघटनपछि मन्त्री थप गर्न नपाउने भनेको तर साविककै मन्त्रीहरूलाई पुनर्स्थापित नगरेको बताए।
‘उहाँहरू स्वत: आउन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वोच्चको आदेशपछि विघटनपूर्व कायम रहेका मन्त्रीहरूलाई विस्तारकै लागि हेरफेर गरिएको हो, संविधानको प्रावधान देखाएर आफूहरूलाई मन्त्री कायम गर्ने परमादेश माग्दै रिट दिन आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘यहाँनिर म व्याख्याको प्रश्न देख्छु।’
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि विघटनपूर्वका मन्त्रीहरूबारे आदेशले केही नबोलेको बताउँछन्। उनीहरूले फेरि मन्त्री बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘विघटनपछि हटाइएका मन्त्रीहरूबारे के गर्ने भन्ने रिट निवेदनमा माग थिएन। अदालतले पनि उनीहरूबारे बोलेन। यहाँ त विघटनपछि थप्न नपाइने मात्र भनिएको हो। हटाएका मन्त्रीहरूले यो आदेशअनुसार फेरि काम गर्न पाउने भन्ने नै होइन,’ उनले भने।
विघटनअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल, भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ मन्त्रिपरिषदका सदस्य थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरूलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो ।
जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा शपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्रीले सपथ लिएका थिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ८, २०७८, २०:३६:००